ကင်မရာအရေအတွက်များတိုင်း ပိုကောင်းတဲ့ပုံတွေထွက်ရဲ့လား? – DigitalTimes
၂၀၁၁ မတိုင်ခင်ကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ကင်မရာတွေအများကြီးထည့်ဖို့ စိတ်တောင်မကူးမိခဲ့ဖူးကြပါဘူး။ ၂၀၁၄ ကတည်းကစပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ဖုန်းတွေရဲ့ ကင်မရာ Sensor ကို Megapixel ပမာဏများအောင် တိုးတိုးလာကြပါတယ။် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကင်မရာ၂လုံး dual-lens တွေခေတ်စားလာတော့တာပါပဲ။ ဘာလို့ ကင်မရာ ၂လုံးတွဲတွေတပ်လာကြတာလဲ??
သဘောတရားအနေနဲ့ပြောရရင် ၂ခုသုံးရခြင်းက တစ်ခုက အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် နောက်တစ်ခုက နောက်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ပါပဲ။ ဥပမာ ကားပါကင်ထိုးတဲ့အချိန် မျက်လုံးတစ်ဖက်ပိတ်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်ဘယ်အကွာအဝေးဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကို ဦးနှောက်ကိုပို့ဖို့ နည်းနည်းခက်သွားသလိုပါပဲ။ အခုကင်မရာ၂လုံးတွေလည်း တူတူူပါပဲ။ ဒုတိယ secondary-lens က Focus ချိန်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့ သူနဲ့ကြားက အကွာအဝေး “depth” နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ရယူထားပါတယ်။
Dual-lens ဖုန်းတွေမှာ အရာဝတ္ထုကို Focus ချိန်ပြီး နောက်ခံကိုဝါးပေးထားတဲ့ Bokeh Effect နဲ့ အမိုက်စားပုံတွေကို ရိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရော သွင်းထားတဲ့ Firmware ပေါ်မှာပါမူတည်နေပါတယ်။ Telephoto lens ဆိုရင်တော့ Zoom အလွယ်တကူ ချဲ့ရိုက်လို့ရပြီး ဒါတွေအားလုံးက ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ကင်မရာကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် DSLR ကင်မရာတွေလောက်နီးနီးအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းပါ။
ဥပမာ iPhone7Plus မှာဆိုရင် Telephoto lens က zoom 2x ထိချဲ့လို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်ကတော့ ဖုန်းတော်တော်များများက ဒီလို zoom feature ကိုရဖို့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုပဲသုံးတာများပါတယ်။
ဒုတိယ lens ကို Wide-angle lens အနေနဲ့လည်း စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ချို့ကသုံးထားကြပါတယ်။ Wide-angle lens ဆိုတော့ မြင်ကွင်းတွေအကျယ်ကြီးဆံ့အောင်ရိုက်နိုင်တဲ့ အားသာချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တာပေါ့။
ဒါဆို ဒီ feature တွေအားလုံးကို ကင်မရာ sensor တစ်လုံးထဲမှာပဲ ထည့်လို့မရဘူးလား??
DSLR ကင်မရာတွေမှာတောင် wide-angle ရိုက်ချင်ရင် wide-angle lens တွေတပ်ရသေးတာပါပဲ။ ပုံမှန် lens နဲ့ရိုက်ရင ်ပုံမှန်ဓာတ်ပုံပဲရမှာပါပဲ။ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ ကင်မရာတစ်ခုတည်းမှာတော့ ဒါတွေအားလုံးကို၇ဖို့ သိပ်မျှော်မှန်းလို့မရပါဘူး။
DSLR ကင်မရာတွေမှာတော့ 120 megapixels ထိတောင်ရှိတဲ့မော်ဒယ်လ်တစ်ချို့တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြင့်စား စမတ်ဖုန်းတွေမှာတောင် အရင်တုန်းက 12MP ဆိုတာအလွန်ဆုံးပါပဲ။ ဘာလို့အဲ့ထက်ပိုများအောင် အပြိုင်အဆိုင်မလုပ်ခဲ့ကြတာလဲ? အကြောင်းရင်းကတော့ Megapixel အနည်းအများထက် Transistor အရွယ်အစား Sensor နည်းပညာတွေကိုပဲ မြှင့်မြှင့်လိုက်လို့ပါ။ စမတ်ဖုန်းမှာ MP အနည်းအများထက် သုံးတဲ့ Sensor ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ Megapixel ပမာဏကိုလည်း များများလာအောင် လုပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ပုံကို Crop လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဝါးမသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။ ပုံကို Crop လုပ်လိုက်တဲ့အခါ MP များတော့ ပုံရဲ့အရည်အသွေးအရမ်းကျသွားတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အခုခေတ်လူအများစုကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ဖို့အတွက်လောက်ပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာများပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ ဥပမာ-Facebook, Instagram, Twitter တို့မှာပုံတင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ပုံက 50MP လောက်ရှိလည်း သူတို့ရဲ့ ဆာဗာတွေကခွင့်ပြုထားတဲ့အများဆုံး MP ပမာဏ (8MP ဝန်းကျင်) လောက်ထိ ပြန်လျှော့ချပစ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာကပုံတွေ Resolution မကောင်းတတ်တာ သိပ်မဆန်းပါဘူး။
အချုပ်ပြောရရင် အခုခေတ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက Megapixel ပမာဏကိုဂရုစိုက်လာထက် သုံးထားတဲ့ Sensor နဲ့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ ပိုအာရုံစိုက်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Lens ကောင်းကောင်းကိုသုံးပြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ကူလိုက်တဲ့အခါ MP နည်းတာများတာ ကင်မရာအရေအတွက်နည်းတာများတာတွေက အဲ့လောက်အရေးမပါတော့ပါဘူး။ Pixel တွေကိုပဲ ကြည့်ပါ ကင်မရာ၂လုံးမပါလဲ ဓာတ်ပုံတွေက အလန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ MP အနည်းအများအရေးမကြီးဘူးမဟုတ်ပေမယ့်လည်း MP ရော ကင်မရာ sensor တွေပါ ဂျွတ်နေရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပဲလို့ပြောရမှာပါပဲ။
Tags: Dual Camera, Multiple Lens
တန်ဖိုးနည်း စမတ်ဖုန်းတွေထဲက အသင့်တော်ဆုံး စမတ်ဖုန်း Redmi6Pro (Budgeteer)